संसारकै दुर्लभ घटना :७ हजार १२९ मिटर अग्लो हिमालमा पहिलो पटक पुग्यो नेपाली कुकुर ! - LaltinKhabar
संसारकै दुर्लभ घटना :७ हजार १२९ मिटर अग्लो हिमालमा पहिलो पटक पुग्यो नेपाली कुकुर !
काठमाडौं । ७ हजार १२९ मिटर अग्लो बरुन्त्से हिमालको चुचुरोसम्म पहिलो पटक कुकुर पुगेको छ। गत महिना खुम्बु क्षेत्रबाट आरोहण दललाई पछ्याउदै डेड बर्षको कुकुर चुचुरोसम्म पुगेको हो।
सामान्यतय उच्च हिमाली क्षेत्रमा पुग्न आरोहीले अक्सिजनको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। अमेरिकन आरोही आरोही डान मेजुर पनि ७ हजार मीटरमाथि कुकुर पुग्दा चकित परे। आरोही गाइड जाङबु शेर्पालाई पछ्याउँदै उक्त कुकुर बिना अक्सिजन चुचुरोसम्म पुगेको थियो।
करिब पाँच हजार मिटरसम्म उचाइका मानव बस्तीमा कुकुर बस्ने गरे पनि सात हजार मीटर उचाइसम्म कुकुर पुगेको पहिलो पटक देखेको गाइड जाङबु शेर्पाले बताउँछन्। बाटामै भेटिएको कुकुर आधार शिविरसम्म पछ्याउँदै आएको र पछि खानको आशा गर्दै चुचुरोसम्म पुगेका उनले जानकारी दिए।
आरोहण दलका आधारशिविर मेनेजर काजी तामाङले टेन्टमा थुनेर राखेको तर केही समयपछि छाड्दा हिमालतर्फ दौडिएकाले थियो। आरोहण दलले कुकुरलाई काठमाडौंसम्म ल्याएको र ‘बरु’ नाम दिएर हेरचाहा गर्दे आएको गाइड शेर्पाले जनाए।